Nhau - Zero Plastic bepa mukombe bepa rakawana TÜV inodzikisira kompositi chitupa
Zero Plastiki bepa mukombe bepa rakawana TÜV inokanganisa manyowa chitupa
Musi waMay 25, mukuru mutevedzeri wemutungamiriri weTÜV Rheinland Greater China akaburitsa DIN CERTCO uye European Bioplastics Association maindasitiri setifiketi zvitupa kuAPP Sinar Mas Group Industrial Paper.
Chigadzirwa chakasimbiswa ndicho chitsva chakagadzirwa Zero Plastic® bepa mukombe bepa reAPP Sinar Mas Boka Rezvigadzirwa Mapepa. Iyo inosimbiswa neTÜV Rheinland yakavakirwa paDIN EN13432: 2000-12 uye ASTMD6400: 2019-01 zviyero. Nekuwanikwa kweiyo compostable inodzikisira chitupa, inomiririra Zero Plastic® zvigadzirwa zvigadzirwa zvakanyatso kupasa kuyedzwa uye kupihwa zvitupa zvakasiyana-siyana zvine chekuita mudzimba nekune dzimwe nyika (compostable degradation certification, biological toxicity safety testing, POPs fluorine testing, total specific migration testing, nezvimwewo. .).
Pasi pemamiriro ekurambidzwa kutsva kwenyika pamapurasitiki uye kurambidzwa kwepurasitiki, makapu emapepa, mabhegi emapepa, mabhokisi emasikati, nezvimwewo zvinogadzirwa neAPP Jinguang Group's Zero Plastic® zvigadzirwa zvigadzirwa zvinogona kudzokororwa mupepa pulp kana manyowa. Kuziva iko kushomeka kwekushandisa kwesosi kudzoreredza, panzvimbo yekupisa uye kuzadza ivhu, iri mhinduro chaiyo yekubatsira kusarerekera kwekabhoni uye kudzikisira kabhoni.
Kupuruzira nekugadzira mapepa kwazvino ndeyegirinhi uye inoenderera "kutenderera kukuru", uye kugadzirwa, kudyiwa, kushandiswazve, uye kudzoserwa kwepepa pasi pechiratidzo cheZeroPlast® inoita "diki kutenderera", ichichengetedza huni hombe pasi. Semutungamiri wepasi rese mukukanya nekugadzira mapepa, APP inoda kushanda pamwe chete kugadzira budiriro inogara iripo yezvinhu zvipenyu zvepanyika uye kubatsira zvizvarwa zvedu zvinotevera.
① EPP chikafu giredhi chengetedzo yezvakatipoteredza chipingamupinyi inoita kuti pepa pepamusoro riine yakanaka yekudzivirira zvivakwa uye kupisa sealability. Izvo hazvitore PE kupfekedza kugadzirisa. Iyo inokodzera kugadzira zvakananga marudzi ese emapepa makapu, bepa mbiya, mabhokisi emasikati, masupuri emabharasi uye zvimwe zvekutakura zvekutakura zvekudya. Zvimwe zvakatipoteredza zvine hushamwari uye zvakachengeteka kurongedza mhinduro;
② Hapana purasitiki, isina mumiririri we fluorescent, inogadziriswazve zvizere (inogona kudzorerwa zvakananga), inodzikisirwa (100%), inogadzikana, yakachengeteka uye inochengetedza zvakatipoteredza, zvinoenderana neyakajairika girosa yekuvandudza maitiro ekuputira zvinhu;